Forex Trading Ways – King of Future
Forex Trading Ways
Posted November 25, 2019 kingoffuture
Hello Trader တို့ရေ 🤗 Monday ဈေးကွက်စဖွင့်တဲ့နေ့
ဆိုတော့ Pro trader တွေ forex ဈေးကွက်မှာဘယ်လို trading လုပ်ကြလဲ ? ဆိုတာကို sharing လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်
🛡 Forex မှာအောင်မြင်နေတဲ့ ပညာရှင်တွေက ခက်ခဲတဲ့
အခြေခံအချက်အလက်များကို စုဆောင်းပြီး trading ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ လေ့လာသူများပိုမိုလွယ်ကူစေဖို့ လွယ်ကူစေဖို့
-Automated or robot trading (အလိုအလျောက် or
စက်ရုပ်အသုံးချပြီး trade ခြင်း)
Software အသုံးပြုပြီး ဈေးကွက်ရဲ့ စနစ်ကိုက်ညီတဲ့ပုံစံတွေကို computer မှတဆင့်တွက်ချက်ကာ ကိုယ်စားအလုပ်လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည် ။
-Discretionary Trading (ခန့်မှန်း trade ခြင်း )
Trading ပြုလုပ်သူတွေဟာ ဈေးကွက်ကို ခန့်မှန်းပြီး tradeရတာမျိုးပါ ။ pro trader အများစုက ဒီနည်းကိုအသုံးပြုတာများပါတယ်။
-Technical trading ( နည်းပညာနည်းစနစ်နဲ့ trade ခြင်း )
ဈေးကွက်အတက်အကျတွေကို ဇယားတွေကို အသုံးချတွက်ချက်တာဖြစ်ပါတယ် ။နည်းပညာနည်းစနစ် နဲ့အသုံးချသူများရဲ့ တူညီတဲ့ အချက်ကတော့ စားရင်းဇယားကို ကြည့်ပြီး အပြောင်းအလဲ ကိုလေ့လာနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
-Fundamental trading (အခြေခံ ကုန်သွယ်ခြင်း )
ဈေးကွက်ရဲ့ သတင်းတွေကိုအဆက်မပြတ်လေ့လာပြီး trading ပြုလုပ်ကြခြင်းပါ ။သတင်းအချက်အလက်က လျင်လျင်မြန်မြန်ပြောင်းလဲ နိုင်ပါသည် ။ဒါကြောင့် pro trader တွေကယခုစနစ်အပြင် technical trading စနစ်ကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုကြပါသည် ။
-Day Trading (တစ်နေ့တာ trading လုပ်ခြင်း)
ဈေးကွက်မှာ တစ်ရက်အတွက် buy order or sell order ကို အပိတ်အဖွင့်လုပ်သူများဖြစ်ပါသည် ။
ဆိုလိုချင်တာက တစ်ရက်အတွင်း အကြိမ်ပေါင်းများစွာ အရောင်းအဝယ် လုပ်ကြတာပါ ။
ဒီနည်းကတော့ day trading လုပ်နည်းနဲ့ဆင်ပါတယ် ။သူကပိုပြီး အကြိမ်ပေါင်းများရေ ပိုများပါတယ် ။pips အနည်းငယ်နဲ့ အမြတ်ရဖို့အတွက်ဈေးကွက်မှာ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ဝင်ထွက်ရောင်းဝယ်ရတာပါ။ကျွမ်းကျင်သူတွေက ဒီနည်းကို gambling ဆန်တာကြောင့် ကျွမ်းကျင်သူများက အားမပေးပါဘူး ။
Swing trading / position trading
ဒီပုံစံကတော့ short ကိုယူပြီဈေးကွက်အတက်အကျကို အသုံးချတာဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီလိုနည်းနဲံtrading လုပ်ကြသူတွေကတော့ ဈေးကွက်အရှိန်အဟုန်2ကနေ 10 လစဉ် ပျှမ်းမျှရှိမှသာအရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်ကြပါသည် ။
ဒီစနစ်ကတော့ဈေးကွက်ရဲ့ support and resistance ကိုကြည့်ပြီး ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ထိုစနစ်ကိုစောင့်ကြည့်ပြီး trader တွေကတွက်ချက်အသုံးပြုကြပါတယ်။
ဒီဈေးကွက်ရဲ့ကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲကို စောင့်ကြည့်ကာ အမြတ်ရဖို့ ကြိုးစားနိုင်ပါသည်။ဒါကို ဆန့်ကျင်ပြီး trading လုပ်သူများကြ ဆုံးရှုံးနိုင်ပါသည်။ forex မှာ professional ကျကျ trade နေသူများဟာ ကြီးမားတဲ့ အပြောင်းအလဲကို အသုံးချကာ trading လုပ်နေကြသူများဖြစ်ပါတယ်။
Counter -trend trading
ဈေးကွက်မှာကြီးမားစွာ ပြောင်းလဲမှုဟာ တည်မြဲမှုမရှိပါဘူး ။သင်ဟာပါးနပ်တဲ့ trader ဆိုရင်တော့ ဒီနည်းကိုကောင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဒါပေမဲ့ ဒီနည်းလမ်းက အန္တရယ်များတဲ့ အတွက် တိကျတဲ့ သတင်းအချက်အလက်ရှိမှသာ စွန့်စားသင့်ပါတယ်။
Carry trading ဟာအတိုးနှုန်းမြင့်တဲ့ငွေကြေးကိုဆန့်ကျင်ပြီး ကာလရှည်တခုအထိစောင့်ပြီး အမြတ်ရှာတာဖြစ်ပါတယ်။forex ရဲ့ကြားခံရောင်းဝယ်သူများကတော့အတိုးနှုန်းအပြောင်းအလဲပေးဆောင်ခြင်း (သို့မဟုတ်)လဲလှယ်ခြင်းကိုလုပ်ဆောင်ရတော့မှာပါ။
ဒါကြောင့် stop loss ကို ထားရပါမယ် ။
⟵EUR/USD Intraday: key resistance at 1.1075.
EUR/USD Intraday: key resistance at 1.1035.(25.11.2019)⟶
Today Important Data ( 23.12.2019)
The Goal Of Successful Trader
GBP/JPY intraday: rebound towards 143.52 (20.12.2019)
GBP/USD Intraday: key resistance at 1.2975.(24.12.2019) December 24, 2019
Today Important Data ( 23.12.2019) December 23, 2019
Economic analysis December 23, 2019
The Goal Of Successful Trader December 20, 2019
GBP/JPY intraday: rebound towards 143.52 (20.12.2019) December 20, 2019
King of Future Head Office
No, 119(A), Dana Aung Lane, Near PawSanHmwe Road, Thuwana, Thingangyun , Yangon.
09 261874100, 09 777456758
7th Floor, Corner of 37th Street and 75th Street, Maha Aung Myay Township, Mandalay.
09 964033115, 09 774484170
Mon-Fri [9:30 AM to 5:30 PM]
Sat [10 AM to3PM]
Developed by Auro Karshine |